Ogaden News Agency (ONA) – Raabi – waan ilmeeyey markaan la kulmay dhalinyarada KA
Raabi – waan ilmeeyey markaan la kulmay dhalinyarada KA
Halgame Maxamad Raabi oo ka mid ah xubnaha jaaliyadda UK oo maalmahan socdaal ku marayay meela ka mid ah Bariga dhexe iyo Afrika ayaa kulamo kala duwan la yeeshay xubnaha jaaliyadda Konnfur Afrika. Mudane Raabi ayaa maruu u waramayay wariyaha ONA waxaa ka mid ahaa hadaladiisa; “Waxaan u imid dhalinyaro iyo jaaliyad igaga ilmaysiiyay markaan arkay wadaniyadooda iyo dhaq-dhaqaaqa ay wadaan.”
Intuu joogay Koonfur Afrika halgame Raabi wuxuu shirar kala duwan la qaatay xubnaha ururka iyo guddiga jaaliyadda iyo Odayaasha iyo gabdhaha. Shirarkaa ayuu halgame Raabi uga xogwaramay jaaliyadda siyaabaha ay uga socdaan caalamka gaar ahaan dalalka Yurub halganka shacabka S.Ogadenya, isagoo u sheegay inay jaaliyadaha Yurub sanadkii tagay iyo midka hadda socdaba ay qaadeen ololayaal farabadan oo ama banaanbaxya ah ama ka qaybgal dhagaysiyo barlamaanada dalalka Yurub ah. Wuxuu intaa raaciyay inuu gumaysiga isku dayay inuu jaaliyadaha ku dhex abuuro qabyaalada iyo reero taasoo loo xilsaaray safaaradaha gumaysiga inay fuliyaan. Hasa ahaatee buu yidhi halgame Raabi, kuma aanu guulaysanain arintaa waxayna kala kulmeen Cabdi iley iyo wafdigii Wayaanaha ahaa ee la socday guuldarro balaadhan.
Xubnaha jaaliyadda JOKA ayaa iyaguna dhankooda warbixin ka siiyay ay uga xogwarameen hawlaha ay qabtaan iyo dadaalka ay ku jirto jaaliyadda Koonfur Afrika, iyagoo iska kaashada sidii looga hortagi lahaa dabadhilifyada uu guamaysiga u soo dirsaday KA ee safaaradda Itobiya ay maamusho. Waxay u sheegeen inay isha ku hayaan xubnaha jawaasiista ah ee jaaliyadda ku dhex jira ayna ogsoon yihiin hawlaha loo xilsaaray inay fuliyaan.
Socdaalka halgame Raabi uu ku joogo Koonfur Afrika ayaa ah mid ay jaaliyadaha isku dhaafsadaan xogwaran iyo khibradaha kala duwan ee jaaliyadaha.